सेमील्ट विशेषज्ञले 10 वेब स्क्रैपिंग उपकरण प्रोग्रामरहरूको लागि साझेदारी गर्दछ
द वेब स्क्रैपिंग अनुप्रयोगहरु विभिन्न परिदृश्यहरूमा, वेबमास्टर्स, विद्वानहरू, पत्रकारहरू, प्रोग्रामरहरू, विकासकर्ताहरू, र ब्लगरहरूका लागि उपयोगी डेटा निकाल्दै। तिनीहरू बहुविध वेब पृष्ठहरूबाट डेटा प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ र व्यापक रूपमा उद्यम र बजार अनुसन्धान फर्महरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू पनि फोन नम्बरहरू र विभिन्न साइटहरूबाट इमेलहरू स्क्रैप गर्न प्रयोग गरिन्छ। यदि तपाईं खरीदारीमा हुनुहुन्छ र फरक उत्पादनहरूको मूल्यहरू ट्र्याक गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं यी वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरू र अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
1. क्लाउड स्क्रैप वा Dexi.io
क्लाउड स्क्रैप वा Dexi - best network setup.io विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट डाटा सङ्कलन समर्थन गर्दछ र तपाईँको उपकरणमा डाउनलोड गर्न आवश्यक छैन। यसको मतलब यो उपकरणमा पहुँच गर्न सकिन्छ र अनलाइन प्रयोग भएको छ र तपाईंको लागि कार्यहरू प्राप्त गर्न एक व्यापक ब्राउजर-आधारित सम्पादक छ। निकालेको डाटा CSV र JSON ढाँचामा बचत गर्न सकिन्छ, र Box.net र Google Drive मा।
2. स्क्रैपिंग हब
यो क्लाउड-आधारित स्क्रैपर र डाटा निष्कर्षण अनुप्रयोग हो। यसले विकासकर्ताहरू र वेबमास्टरहरूलाई सेकेन्ड भित्र उपयोगी र सूचनात्मक डेटा ल्याउन अनुमति दिन्छ। स्क्रैपिंगहाब अब सम्म विभिन्न ब्लगर र शोधकर्ताहरु द्वारा प्रयोग गरिएको छ। यसमा एक स्मार्ट प्रोक्सी घुमाईएको छ, खराब बटहरू विरुद्ध समर्थन प्रदान गर्दछ र एक घण्टा भित्र सम्पूर्ण साइट स्क्रैप गर्दै।
पार्स हब विकसित र एकै समयमा एकल र धेरै वेब पृष्ठहरू क्रल गर्न डिजाइन गरियो; यो सत्र, पुनर्निर्देशित, AJAX, जाभास्क्रिप्ट, र कुकिजका लागि उपयुक्त छ। यो वेब स्क्रैपिंग अनुप्रयोगले जटिल वेब पृष्ठहरू पहिचान गर्न र पढ्न योग्य फारममा स्क्रैप गर्न एक अनूठा मेशिन सिकाउने प्रविधिको प्रयोग गर्दछ।
भिजुअलस्क्रैरको सबैभन्दा राम्रो भाग यो हो कि यो निर्यातले SQL, XML, CSV, र JSON ढाँचामा डेटा निर्यात गर्दछ। यो सबभन्दा राम्रो र सबैभन्दा उपयोगी डेटा इन्टरनेटमा अनुप्रयोगहरू स्क्रिप गर्दै र निकाल्न र वास्तविक समयमा जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। प्रीमियम योजनाले तपाईंलाई प्रति महिना $ 49 खर्च गर्नेछ र तपाईंलाई 100k भन्दा बढी पृष्ठहरू पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ।
यो सबै भन्दा राम्रो छ यसको अनलाइन बिल्डरको लागि र प्रयोगकर्ताहरूको लागि फरक डेटासेटहरू फाराम गर्दछ। Import.io ले भिन्न वेब पृष्ठहरूबाट डाटा आयात गर्दछ र यसलाई CSV फाइलहरू निर्यात गर्दछ। यो यसको उन्नत प्रविधिको लागि चिनिन्छ र प्रति दिन लाखौँ पृष्ठहरू ल्याउन सक्षम छ। तपाईं डाउनलोड मुक्त र free import.io सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ। यो लिनक्स र विन्डोजसँग मिल्दो छ र अनलाइन खाताहरू सिंक्रोनाइज गर्दछ।
यो सर्वोत्तम डेटा निष्कर्षण अनुप्रयोगहरु मध्ये एक हो। यो उपकरणले संरचित र वास्तविक-समय डेटामा सजिलो र सिधा पहुँच प्रदान गर्दछ र विभिन्न वेब पृष्ठहरू क्रल गर्दछ। यसले तपाईंलाई 200 भन्दा बढी भाषाहरूमा इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न सक्छ र XML, RSS र JSON ढाँचामा आउटपुटहरू बचत गर्न सक्छ।
यसले हामीलाई सम्पूर्ण वेबसाइट, ब्लगहरू, सोशल मिडिया साइटहरू, ATOM वा आरएसएस फिडहरू ल्याउन अनुमति दिन्छ। यसले डेटा (पठाउन) स्प्याम स्पाम सुरक्षाको साथमा धेरै प्रकारको डेटा प्रबन्ध गर्न यसको Firehouse API को लागि धन्यवाद, पढ्न योग्य र स्केलेबल ढाँचामा डेटा बचत गर्छ। यसले स्प्यामबाट मुक्त गर्न मद्दत गर्दछ र अनुचित भाषा प्रयोग रोक्छ, तपाईंको डेटाको गुणस्तर सुधार र यसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ।
धेरै लोकप्रिय र डेटा निकासी विशेषताहरु संग यो एक लोकप्रिय फायरफक्स एड-अन हो। बाहिर हटाउनुहोस् डेटा मात्र भण्डार गर्दछ र तपाईंको सामग्रीलाई उचित र पढ्न योग्य ढाँचामा क्रल गर्दछ। तपाईं कुनै पनि प्रकारको वेब पृष्ठ कोडको कुनै आवश्यकता बिना स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ।
यो अझै अर्को शक्तिशाली र अद्भुत वेब क्रलर र डेटा स्क्रैपिंग अनुप्रयोग हो। 80legs एक लचीलो उपकरण हो जुन तपाईंको आवश्यकताहरु कन्फिगर गर्दछ र धेरै डाटाहरु लाई तत्काल ल्याउँछ। यो वेब स्क्रैरले 600,000 डोमेनहरू अब सम्म स्क्रैप गरेको छ र PayPal जस्तै दिग्गजों द्वारा प्रयोग गरिन्छ।
स्क्रैपर एक विस्तृत र उपयोगी क्रोम एक्सटेन्सन व्यापक डेटा निकासी गुण संग हो र तपाईंको अनलाइन अनुसन्धान को आसान बनािन्छ। यसले Google पानाहरूमा स्क्रैप गरिएको डाटा निर्यात गर्दछ र शुरुआती र विशेषज्ञ दुवैका लागि उपयुक्त छ। तपाइँ सजिलै संग यसको क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुनेछ र स्क्रैपरले तपाईको XP आवश्यकताहरूको आधारमा सानो XPath उत्पन्न गर्दछ।